Ny mpiaro efijery tsara indrindra eny an-tsena dia PanzerGlass | Androidsis
PanzerGlass, mpiaro efijery tsara indrindra eny an-tsena
Alfonso ny voankazo | | About us
Betsaka ny olona manontany ahy mpiaro inona no vidiana hiarovana ny efijery finday avo lenta. Hatramin'izao dia nanoro ny vokatra rehetra avy amin'ny ZAGG aho, iray amin'ireo mpanamboatra tsara indrindra ao amin'ity sehatra ity ary miaraka amina vokatra marobe hita ao amin'ny magazay Espaniôla. Mandra-pihaonako ireo tovolahy avy any PanzerGlass.
Ary, na dia eo amin'ny finday avo lenta atolotra ao amin'ny MWC 2015 aza ny ankamaroan'ny jiro, indraindray dia gaga ianao. Ahoana ny fomba hahitana an'i Rasmus Bach Christensen, Manager marketing ao amin'ny PanzerGlass, mamely ny efijery an'ny Samsung Galaxy S4 Mini amin'ny marmara ary velona izy nefa tsy mikorontana. Namela ahy hiloa-bava aho. Moa ve PanzerGlass ho mpiaro efijery tsara indrindra eny an-tsena?
PanzerGlass, mpiaro efijery tsara indrindra ho an'ny finday avo lenta na takelakao
amin-kitsimpo, Noheveriko fa fitaka izany ka nangataka taminy aho mba hamelona telefaona ary hamerina ilay fitsapana. Tsy nisy olana. Ny Galaxy S4 Mini dia lany bateria fotsiny. Navadiny io, noporehiny indray, nampijaliany tamin'ny antsy antsy ary, nitsiky, nasehony ahy indray ilay efijery tamina toetry ny tonga lafatra.
Famosaviana inona izany? Io no zavatra noeritreretiko voalohany. Avy eo i Rasmus dia tsy nisalasala nanazava tamiko ny tsiambaratelon'ireo mpanangona efijery mahavariana natolotr'i PanzerGlass. Ary ny ekipan'ny PanzerGlass dia manamboatra ny sarimbariny saika tsy simba amin'ny alàlan'ny diamondra marina sy ny fitaratra Japoney nanamafy anao.n fitaovana 9 heny matanjaka noho ny fitaratra mahazatra.
Mba hanaovana izany, dia apetrany amin'ny maripana mihoatra ny 500 Japanese ny takelaka fitaratra japoney efa mihamafy mandritra ny 5 ora, hanapaka amin'ny fampiasana diamondra, sosona manify tena kely izay hiafara amin'ny famokarana vokatra tena mahatohitra. Ankoatry ny manana sosona oleophobika, ka tsy misy dian-tànana tavela eo amin'ny efijery.
Toy ny nolazaiko, mpiaro ny efijery PanzerGlass tena mahatohitra izy ireo fa tsy mety simba. Saingy nieritreritra ny zava-drehetra ny mpanamboatra alemanina. Raha sanatria vaky ilay mpiaro dia tsy hikorisa amin'ny sombin-javatra kely sy maranitra an-jatony izy io, fa hivadika takelaka vitsivitsy, hisorohana ny fahasimban'ny telefaona noho ny sarimihetsika manohitra ny ranomaso manify izay hiaro ny smartphone na tablette-nao amin'ny ankamaroan'ny tranga.
En ny tranonkalany dia misy ny lisitry ny terminal mifanaraka Ary raha tsy efa antitra be ny findainao na ny takelakao dia mety hahita fiarovana ianao PanzerGlass ho azy. Na dia indrisy fa tsy misy mpaninjara ofisialy any Espana, raha mitady Amazon ianao na mitovy amin'izany dia afaka mahita ireo mpiaro ireo ao a vidiny manodidina ny 20-30 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » PanzerGlass, mpiaro efijery tsara indrindra eny an-tsena
Sebastian Navarro Panzetta dia hoy izy:
Valiny tamin'i Sebastian Navarro Panzetta
panthech dia hoy izy:
ity dia vera voafehy… .. misy an'arivony eny an-tsena ary manodidina ny € 7-12 no azoko nandritra ny herintaona mahery
Valiny any Pantench
ZTE Blade S6 Plus, nosedrainay ny phablet vaovao an'ny mpanamboatra aziatika
Manomeza voninahitra 4X, ireto no tsapanay